थवाङमा क. कृष्णबहादुर महराको बाजागाजासहित भव्य स्वागत - Left Review Online
क. कृष्णबहादुर महराको रोल्पा यात्रा
रोल्पाली जनताले सुरूदेखि नै उहाँमाथि लागेको आरोप झूठो र मिथ्या भएको प्रतिक्रिया दिँदै रोल्पाली नेता महरालाई काठमाडौँमा बस्नेहरूले भन्दा आफूहरूले राम्ररी चिनेको बताउने गरेका थिए ।
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा निवर्तमान सभामुख क. कृष्णबहादुर महरा ‘अमरसिंह’लाई जनयुद्धको उद्गम थलोको रूपमा चिनिने रोल्पाको थवाङमा बाजागाजासहित भव्य स्वागत गरिएको छ ।
दस वर्षे महान जनयुद्धका वरिष्ठ नेतृत्वकर्ताहरू मध्ये एक रहनुभएका रोल्पाली जनताका प्यारा नेता क. कृष्णबहादुर महरालाई देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्रमा झूठा आरोप लगाई पक्राऊ गरिएको थियो । आफूमाथि लागेको आरोपलाई सुरूदेखि नै पूर्णरूपले अस्वीकार गर्दै कानूनी प्रक्रियालाई सघाउँदै आफ्नो प्रतिरक्षा गरिरहनुभएका नेता क. महराले झण्डै ३ महिनाको जेल जीवनपछि मुद्दामा सफाइ पाएसँगै रिहा हुनुभएको थियो ।
अदालतबाट क. महराले सफाइ पाएसँगै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक भरोसिला नेता र नेतृत्वका विश्वास पात्रको रूपमा रहनुभएका क. महराको राजनीतिक जीवन समाप्त गर्ने र अध्यक्ष प्रचण्डसहित जनयुद्धबाट आएको नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्र चकनाचुर बनेको छ ।
दुई सय चालिस वर्षसम्म नेपाली जनताको छातिमाथि बन्दूकको बलमा शासन गरिरहेको जहानिँया शाही राजतन्त्रलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्ने दस वर्षे महान जनयुद्धको आधार इलाकाको रूपमा रोल्पा विश्वभर प्रसिद्ध छ । रोल्पाबाट सयौँ योद्धाहरूले जनयुद्धमा शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ भने बेपत्ता हुने र घाइते तथा अपांग हुने योद्धाहरूको संख्या हजारौँमा रहेको छ । त्यो महान रोल्पाको पनि मुटु हो – थवाङ । त्यही थवाङमा निवर्तमान सभामुख क. कृष्णबहादुर महरा आज पुग्नुभएको थियो र थवाङवासी जनसमुदायले उहाँलाई बाजागाजा, फूलमाला र अबिरजात्रा गरेर भव्य स्वागत गरेका छन् । थवाङवासी जनसमुदायको एउटै स्वर थियो – “रोल्पाको छोरो महरालाई फसाउन खोजिएको थियो तर ढिलोचाँडो सत्यको जीत भयो ।”
रिहा भएपछि सबैभन्दा पहिले आफू दाङ र रोल्पाका जनताको बिचमा पुग्ने बताउनुभएका क. महरा फागुन १२ गते आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दाङ पुग्नुभएको थियो । दाङका जनताले पनि उहाँको बाजागाजा र अबिरजात्रा गरेर भव्य स्वागत गरेका थिए । दाङमा करिब एक साताको जनसम्पर्क र सक्रिय भेटघाटपछि उहाँ रोल्पा प्रस्थान गर्नुभएको थियो । रोल्पाका विभिन्न स्थानहरुमा भेटघाट गर्दै क. महरा थवाङ पुग्नुभएको हो ।
तस्वीरमा केही झलकहरूः
पछिल्लाे - अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसबारे केही कुरा
अघिल्लाे - त्यो भत्केको घर, जसले पूर्वसभामुख महरालाई भावुक बनायो